Alahady 10 janoary 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady Fitondrana am-bavaka ireo tompon'andraikaitra eto amin'ny Fitandremana
"MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO"
Mbola mandinika izany lohahevitra izany isika amin’izao alahady manaraka ny epifania izao. Alahadin’ny tomponandraikitra ihany koa. Nitarika ny fotoana anio tamin’ny 10 ora ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no natao.
Novakiana ny Salamo 108 : 1-5 ho fiderana an’Andriamanitra. Natao ny hira Ffpm 746: 1, 2, 3 rehefa izany. Notohizana avy hatrany tamin’ny vavaka, izay narahin’ny feon-javamaneno avy eo.
FOTOANA HO AN’NY TANORA SY NY ANKIZY
Tantara no nentin’i ANDRIANARISOA Rado Navalona nitondrana ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora ary rehefa izany dia nanao ny hira Ffpm 408 :7. Nofaranany tamin’ny vavaka.
Natao ny hira Ffpm 177 : 1, 4 ho fiomanana amin’ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio dia ny I Samoela 16 : 1 – 13, Lioka 4 : 14 – 22, Apokalypsy21 : 22 – 27.
Natao ny hira Ffpm 206 : 1, 5 mialoha ny hafatra.
Ny Filazantsara araka ny Lioka no nitondran’ny Mpitandrina RAZAFINDRATSINANA Finaritra ny hafatra. Ny tantara eto amin’ity Filazantsara ity dia Jesoa avy natao batisa ary nandalo fakam-panahy.
Rehefa niverina avy any Galilia i Jesoa dia nanohy ny asa fanaony. Namaky ny Tenin’Andriamanitra tao amin’ny Synagoga Izy, ary talanjona ny olona rehefa nihaino Azy. Ny bokin’ Isaia no novakian ’i Jesoa tamin’izany. Inona àry no nahatalanjona ny olona? hoy mantsy ny Teny voalaza hoe : « Androany no efa tanteraka eo anatrehanareo izany Soratra izany, dia ny amin’ny fahatongavan’ Ilay Mesia ».
Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo. Nohariny tamin’ny olona lany filoha izy ka manolotra ny programan’asany. Teo Jesoa no nilaza ny fandaharana sy programan’asa izay efa tanteraka.
Efa tanteraka eo anatrehanareo izany Teny izany, hoy Jesoa.
Isika tokoa mantsy indraindray dia tsy manaiky izany teny fahatanterahana izany. Ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy fanjakana mbola ho avy fa efa iainana mihitsy. Efa ao anatintsika izany.
Matoa isika mbola misalasala dia tsy miaina izany Teny voalaza izany. Tsy ao anatinao Ilay Mesia mpamonjy izay manatanteraka izany.
Matoa Izy milaza ny teny hoe « androany » dia midika izany fa efa nisy teo aloha ; mitranga izany amin’ny fotoana itenenany ary mbola ho amin’ny hoavy ihany koa izany.
Variana loatra isika amin’ny rotoroto sy geja izay iainantsika isan’andro. Tsy manokana fotoana itodihana Aminy isika. Izy Tompo anefa dia efa teo, eo ary mbola ho eo foana ho antsika.
Nijoro ho vavolombelona moa ny Mpitandrina ny amin’ny niainany izany fiarahany amin’ny Tompo izany. Sarotra ny fiainana, hoy izy, fa rehefa miaraka amin’Andriamanitra dia vita sy tanteraka foana.
Mila manaiky Azy isika. Izy no Mesia ary « omniprésent » foana eo amin’ny fiainantsika.
Ho an’ny tomponandraikitra dia tsy mora ny asa miandry nefa dia nankahery azy ireo ny Mpitandrina mba hahavita soa ny asa izay tanterahina.
Nisy feon-javamaneno taorian’izany ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika.
Rehefa izany, dia natao ny fanekem-pinoana laharana faharoa ho fanavaozana ny finoana.
RAZAFIMAHARO Mamy, mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanatanteraka izany. Isan’ny voalaza tao ireto manaraka ireto :
Ny alahady 17 janoary dia hatao hitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2021 eo amin’ny sehatry ny Fjkm sady hiarahabana ny filoha IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi. Hisy fidirana roa, dia ny amin’ny 7ora sy ny amin’ny 11 ora, ka ny an’ny SP Andrefana dia ny amin’ny 11 ora ;
Ny dorkasy dia hanatanteraka fivoriana ny 28 janoary amin’ny 9ora30 aorian’ny Ziona Anosibe. Mitondra vatomamy 3 kg no anjaran’Amparibe Famonjena ;
Ny rakitra, voady, vokadehibe dia mitentina 6 039 100 Ar ;
Hitohy ny fotoan’ny AFF rahampitso alatsinainy amin’ny 6 ora hariva ;
Ny komity fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana Amparibe Famonjena dia manao antso amin’ny fifaninanana « logo », ka amin’ny 17 janoary amin’ny 12 ora no faran’izany. Ny fanokafana ny taom-pankalazana dia ny 24 janoary 2021 amin’ny fotoam-pivavahana amin’ny 10 ora.
Nanao fanentanana ny Mpitandrina taorian’izay ary nanamafy ny antso ho an’ireo mpianatra katekomena, mpianatra sefala.
Hisy ny fandraisan-tanana ireo tomponandraikitra eto amin’ny Fiangonana mandritra ny asa vavolombelona.
Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Dera sy Laza » ary rehefa izany dia ny hira Ffpm 75 : 3 no natao ho fanolorana izany.
Tao arinan’izany dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa nandritran’ny fiomanana hoan’ny asa vavolombelona
Ireto avy ireo tomponandraikitra noraisin-tanana nandritra ity fotoana ity : biraom-piangonana, mpampianatra katekomena, mpitendry orga, mpandini-bola, mpanao fafana, régisseur, mpikirakira tranokala, mpakasary ary mpampianatra Sekoly alahady.
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nitarika ny fotoana sy ny hira Ffpm 750 : 1, 5. Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira Ffpm 460 : 3 ny fotoana.
Nitendry ny Orga: Irimanana Eninkaja
Nikirakira ny fafana: Rakotondramboa Andry
Nikirakira ny fanamafisam-peo: Randriambololona Mamisoa
Nandray an-tsoratra ny tatitra: Robel Hanitra
Naka ny sary: Rabemananoro Jonathan